ဗြိတိသျှကောင်စီမှ Development Opportunities (DEVOPS) 2nd batch အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူ - Myanmar Network
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ Development Opportunities (DEVOPS) 2nd batch အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူ
Posted by Myanmar Network on May 26, 2015 at 14:24 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
ဗြိတိသျှကောင်စီ (မြန်မာ) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်များစွာ အကျိုးရှိမည်ဖြစ်သည့် အတိုင်ပင်ခံအကြံပေးများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဦးတည်၍ အလုပ်သင်အတိုင်ပင်ခံ (Trainee Consultants) များကိုလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးမည့် Development Opportunities - Training and skills for aspiring development practitioners ဟု အမည်ပေးထားသော အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်ပထမအသုတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မကြာမီလပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းတွင် ပြီးဆုံးပါတော့မည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုအချိန်တွင် ဒုတိယအသုတ်အတွက် လျှောက်လွှာများကို စတင်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်ရွေးချယ်ခံရသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုဘ၀နှင့် စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် လိုအပ်သောစွမ်းရည်များနှင့် နည်းပညာများ ရမည်ဖြစ်သည်။
တက်ရောက်သူများမှ သင်တန်းကြေးလုံးဝပေးရန်မလိုသည့် ဤအစီအစဉ်၌ ပါဝင်ခွင့်ရသော အလုပ်သင်အတိုင်ပင်ခံများသည် အရပ်ဖက်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုရှိရေး၊ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒသုံးသပ်ခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်း အစရှိသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်တန်း (သို့) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို တက်ရောက်ရပါမည်။ ထို့နောက် သင်တန်းသားများ၏ စွမ်းရည်များ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတများ တိုးတက်အောင် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးမှုပေးမည့် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့် ဆရာများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆရာများ၏ လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးမှုများကို ရယူ၍ ရရှိထားသော ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာအသစ်များကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်တာဝန် (assignment) များ၌ လက်တွေ့အသုံးချခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ကြာ သင်တန်းကာလပြီးဆုံးပါက သင်တန်းပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤအစီအစဉ်တွင် ပညာရေး (Education)၊ ဥပဒေ (Law)၊ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးမြှင့်အားဖြည့်မှု (Civil Society Strengthening)၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု (Economic Development) သို့မဟုတ် လူမှုရေးသိပံ္ပ (Social Science) ကဏ္ဍများ၌ MSc/MA မဟာဘွဲ့များအတွက် သင်တန်းတက်ရောက်နေသော (သို့မဟုတ်) ဘွဲ့ရပြီးသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်ထားသူများသည် ပညာရည်ထူးချွန်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာအပြောနှင့် အရေးစွမ်းရည်များ မြင့်မားခြင်း၊ အကောင်းဖက်သို့ လူအဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုတွင် ခိုင်မာစွာ စိတ်နှစ်မြှုပ်၍ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှု ရှိခဲ့ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာ ဆန်းသစ်တီထွင် တွေးခေါ်နိုင်ခြင်း၊ ၁၂ လ ကြာမည်ဖြစ်သော သင်တန်း၌ အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပြီး အချိန်ပေးနိုင်ခြင်း နှင့် ပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်၍ လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း စသည့် အရည်အချင်းများကို ပြည့်မီရမည်။
ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် လျှောက်လွှာတင်လိုသူများသည် ဤနေရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက် သောကြာနေ့ နောက်ဆုံးထား၍ online မှ လျှောက်ထားရပါမည်။
ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသော လျှောက်လွှာရှင်များကို လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အချိန်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ၂၀၁၅ ခု ဇွန်လ ၂၆ ရက် သောကြာနေ့နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်ပါမည်။ အခြားသိလိုသည်များရှိပါက ဦးဇော်မြတ်လင်း (Programme Coordinator)၊ ဗြိတိသျှကောင်စီ၊ အီးမေးလ် ZawMyat.Lin@mm.birtishcouncil.org နှင့် ဖုန်း ၃၇၀၉၃၃၊ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ လိုင်းခွဲ ၃၃၆၆ ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Development Opportunities (DEVOPS) 2nd Batch (2015-16)
The British Council Myanmar is looking to recruitaselected group of trainee consultants to participate in the 2nd batch of ‘Development Opportunities (DEVOPS), an innovative professional development programme in Myanmar.
The 1st batch of the programme has been running since October 2014 and will finish by the end of August. Eleven participants from different backgrounds and sectors were selected for this batch and provided opportunities to learn essentials skills for development consultancy through trainings, workshops and activities assigned by their mentors.
DEVOPS Myanmar aims to establishacompetitive scheme to buildanational consultancy resource in Myanmar. The programme will offer the chance for successful applicants to build the necessary skills to support social and economic change in Myanmar.
Excellent interpersonal skills (good listening skills, charisma, likes different people, diplomatic, unbiased, good networker, team-member, empathy, sense of humour, likeable, open-minded)
Organizational ability (planning and implementation, deadlines, self-disciplined, time-management)
Ability to think creatively and independently (analytical, problem solving, inquisitive)
Availability and flexibility throughout the program, which will be up to 12 months (September 2014-August 2015).
Under Development Opportunities, trainee consultants will:
Attend an induction course and introduction to consultancy terminology and skills with other DEVOPS interns.
Be matched with mentors, who will guide and support the participants to develop their skills, experience and knowledge in the field onanumber of assignments.
Participate in the development programmes and use newly acquired skills in the field onanumber of assignments, whilst being guided and supported by mentors.
Trainee consultants will also receivealoan ofaBritish Council laptop, email address, British Council business cards for the duration of the programme, andacertificate of participation in the programme on their successful completion. Please note that there are no funds available for accommodation or any other costs relating to the study. Participants must be able to find their own accommodation and be self-supporting during the period of study.
There will bealimited number of places available for this programme, so not every candidate will be successful. Short-listed candidates will be required to attend an interview to confirm their suitability for the course. Only short-listd candidates will be contacted by us to arrangeatime for interview.
If you are interested in applying to be part of the programme, please apply by completing this online form not later than Friday June 19th , 2015. Only short-listed candidates will be contacted by us to arrangeatime for interview by Friday June 26th , 2015 .
T + 95(0)1 370933 Ext: 3366
Permalink Reply by Wintlae Aung on June 1, 2015 at 21:36
I want to know that Do the participants need to study fro the whole day or not
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 17, 2015 at 15:48
Wintlae Aung, The exact class schedule can be known only after the interview.
Permalink Reply by Samantha on June 2, 2015 at 16:15
Could you please tell me the time and the place?
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 17, 2015 at 15:49
Only after the interview, the exact class schedule will be released. Samantha
Permalink Reply by Richard Michael William on June 3, 2015 at 10:54
Permalink Reply by ShweYeePo on June 4, 2015 at 9:47
path time or full time .What time . please tell me. thank u
Permalink Reply by Ashley Hetty on June 6, 2015 at 10:15
It won't be full time. It will be flexible for workers.
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 17, 2015 at 15:51
The exact schedule can be known only after the interview.
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 17, 2015 at 15:50
It may probably be full time but the exact schedule can be known only after the exam. ShweYeePo
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 24, 2015 at 16:53
For more specific details information, please kindly contact to U Zaw Myat Lin at zawmyat.lin@mm.britishcouncil.org or contact to 370933 ext: 3366...Thanks
Permalink Reply by British Council Customer Service on June 24, 2015 at 16:56
Permalink Reply by Mann Thaw Tar on June 8, 2015 at 13:38